Madaxweyne kuxigeenka Galmudug oo kormeer ku tagay Dhismaha Airport Caabudwaaq “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Madaxweyne kuxigeenka Dowlad Goboleedka Galmudug mudane Cali Daahir Ciid ayaa manta kormeer ku tagay Mashruuca Dhismaha Airport ka weyn ee Magalada Caabudwaaq.
Madaxweynaha ayaa waxaa weheliyay Wasiiro ka tirsan Dowlad Goboleedka Galmudug waxayna u kuur galeen halka u marayo Dhismaha Airport Ka Caabudwaaq International Airport.
Guddoomiyaha Gudiga Airport ka Caabudwaaq ayaa sheegay in Shaqadu meel fican marayso waxana uu sheegay in laa iyo hada la diyaariyay Runway dhan 2.5 Km dhawaana la garsiin doono 3KM laamina la saari doono.
Madaxweyne kuxigeenka ayaa Gudiga Airport ka ugu bishareyay in maamulka Galmudug ay Lacag dhan $540,000 kun oo dollar oo la rabay in lagu fuliyo Mashruuc kale lo so leexiyay dhismaha Airport Cabudwaq dhawana ay so gaari doonto.
Ugu danbeyn Guddoomiyaha Gudiga Airport Mudane Cabdiqaadir Dheere ayaa ka mahadceliyay Boqashada Madaxweyne ku xigeenka iyo garab istaaga Dowlada Galmudug.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya iyo dhiggiisa dalka Gabon oo ka wada hadlay xiriirka labada Dal